Robin Van Persie: “Alex Ferguson Wuxuu Ii Sheegay Inuu Joogi Doono Kooxda United Saddex Sano | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Robin Van Persie: “Alex Ferguson Wuxuu Ii Sheegay Inuu Joogi Doono Kooxda United Saddex Sano
Weerar yahanka kooxda Manchester United Robin Van Persie ayaa shaaca ka qaaday in Sir Alex Ferguson uu u sheegay inuu Old Trafford sii joogi doono saddex sanno, hal sanno ka hor inta aanu ku dhawaaqin hawl-gabnimadiisa.
Van Persie ayaa kooxda United ka caawiyay inay ku guuleysato koobkeedii 10-aad, iyada oo Ferguson ay u noqotay midkii 13-aad oo uu United ku hogaamiyo, ka dib markii uu xiddigan kala soo saxeexday Arsenal sannadii 2012-kii, wuxuuna xilli ciyaareedkaas dhaliyay 26-gool, 38-kulan oo uu saftay. Difaacii hore ee United Rio Ferdinand ayaa daboolka ka qaaday in hoos u dhaca Robin Van Persie soo wajahay ka dib Ferguson uu yahay inuu xiddigani si xun uga naxay hawl-gabnimada Ferguson. “Rio waa shakhsi weyn, wax baddan ayuu ila hadlay, wax baa ka jira hadalkiisa” ayuu Van Persie yidhi.
“Go’aankayga aan ku imid Manchester United wuxuu ku qotomay Ferguson, iga raali noqo, Sir Alex, wuxuuna ii sheegay inuu sii joogi doono halkan saddex sanno oo kale, waana ku farxay go’aankaas”. Dhanka kale Robin Van Persie ayaa aqbalay inuu qaab ciyaareedkiisa xun yahay xilli ciyaareedkan wuxuuna intaas ku daray inuu soo kaban doono kulamada soo aadan.